Fivavahana · Febroary, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fivavahana · Febroary, 2018
Tantara mikasika ny Fivavahana tamin'ny Febroary, 2018
Azia Atsinanana28 Febroary 2018
Mamitaka ny endrika malazan'ny kolontsaina marolafy ho toy ny raritakelaka, salady iray lovia ahitàna ireo kolontsaina samihafa mifangaro nefa samy mitazona ny fahamendrehany manontolo,
Maraoka: Hajj sy Vodka, Fez ilay Fifanolanan'ny Fotoana, Ary Ireo Antony Folo Voalohany Hanivanan'ny Maraoka Telecom
Manontany ny antony anivanan'ny Maroc Telecom? Inona no mampiaraka ny hajj sy ny vodka? Ahoana no ataonao mba hivoahana any an'habakabaka? Manana ny valin'ireo fanontaniana ireo i Jillian York ary maro hafa tao anatin'ny fitetezana ny blaogy Maraokana.
Taiwan: Inona No Azon'ny Baseball Atao ?
Azia Atsinanana27 Febroary 2018
...nanainga ireo mpitia baseball sasany hitondra ny fahatsiarovany ny baseball...Tsy fahafahampo ho an'ny Tranon'ny Fo Masina fotsiny ny vokatra azo fa ho an'ireo mpitia baseball ihany koa
Azia Atsimo26 Febroary 2018
Indonezia13 Febroary 2018
Nandritra ny 30 taona mahery, voarara hoan'ny Shinoa tany Indonezia ny fanehoana ny kolontsainy. Nambaran'ny fitondrana tsy refesi-mandidy fa tsy ara-dalàna ny fampiasana ny fiteny sy ny tarehintsoratra Shinoa. Noho ny Filoha Wahid tamin'ny taona 2000, nofoanany ny fanavakavahana natao tamin'ireo Shinoa sy ireo vitsy an'isa tamin'ny ankapobeny.
Eoropa Andrefana09 Febroary 2018
Ny Fiandrasana Ny Fanakonà-Masoandro Tany India
India07 Febroary 2018
Ho an'ny Haindò, tsy tranga fotsiny amin'ny astronomia ihany ny fanakona-masoandro fa tena misy dikany lehibe ihany koa amin'ny fivavahana sy ny finoana ara-kolontsaina izany.